နွေဦးတော်လှန်ရေး တွင်ပါဝင်ခဲ့သော အိန္ဒြကျော်ဇင်ရဲ့တူမလေး မေတိုးခိုင် ဖမ်းဆီးခံရ – Cele Oscar
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ…. မင်းသမီး ချောလေး မေတိုးခိုင် ဟာဆိုရင် လူငယ် ပီပီ သွက်လက် ချက်ချာပြီး အရမ်းကို ထက်မြတ်တဲ့ မင်းသမီးလေးပါ ပဲနော်။ မေတိုးခိုင်ဟာ ဆိုရင် အခု လတ်တလော ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အခြေအနေ မှာ အမှန်တရား ဘက်က ရပ်တည်ရင်း ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူ လူထု လှုပ်ရှားမှု မှာ တက်ကြွစွာပါဝင်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မေတိုးခိုင် က အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရဲ့ တူမလေးဖြစ်ပြီး မေတိုးခိုင် ကလည်း အဒေါ် လိုပဲသူယုံကြည်ရာ ကို အမြဲရှေ့တမ်းကနေပါဝင်ခဲ့ တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖွင့်ခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…။ဒီကနေ့ မှာဆိုရင်လည်း မေတိုးခိုင် အဖမ်းခံလိုက် ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” မအူဝဲ တူမ မေတိုးခိုင် ပါသွားတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ညီမ တင်လိုက်လို့ အကူအညီမဖြစ်မှာ စိုးလို့မတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ဖူးအတွက် speak outလုပ်ပေးကြပါဦး၊ sourceကတော့ ညီမပါ 100%၊ family ကိုတော့ ညီမ confirm မလုပ်ထားပါဘူး၊ ကြားတဲ့ သတင်းတွေ နဲ့ ညီမစုံစမ်းရသလောက် တင်ပေးတာပါ speak outလေးလုပ်ပေးကြပါ please ” ။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း မေတိုးခိုင်လေး အန္တရယ်ကင်းရှင်းပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ အတွက်ဆုတောင်းပေးကြပါ အုံးနော်။ဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ပရိတျသတျ ကွီးရေ…. မငျးသမီး ခြောလေး မတေိုးခိုငျ ဟာဆိုရငျ လူငယျ ပီပီ သှကျလကျ ခကျြခြာပွီး အရမျးကို ထကျမွတျတဲ့ မငျးသမီးလေးပါ ပဲနျော။ မတေိုးခိုငျဟာ ဆိုရငျ အခု လတျတလော ဖွဈပျေါ နတေဲ့ အခွအေနေ မှာ အမှနျတရား ဘကျက ရပျတညျရငျး ပွညျသူလူထု နဲ့ အတူ လူထု လှုပျရှားမှု မှာ တကျကွှစှာပါဝငျလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။မတေိုးခိုငျ က အကယျဒမီ အိန်ဒွာကြျောဇငျ ရဲ့ တူမလေးဖွဈပွီး မတေိုးခိုငျ ကလညျး အဒျေါ လိုပဲသူယုံကွညျရာ ကို အမွဲရှတေ့မျးကနပေါဝငျခဲ့ တာကွောငျ့ ပုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖှငျ့ခံရတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော…။ဒီကနေ့ မှာဆိုရငျလညျး မတေိုးခိုငျ အဖမျးခံလိုကျ ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
” မအူဝဲ တူမ မတေိုးခိုငျ ပါသှားတာတော့ ဟုတျပါတယျ။ ညီမ တငျလိုကျလို့ အကူအညီမဖွဈမှာ စိုးလို့မတငျဖွဈခဲ့တာပါ၊ ဖူးအတှကျ speak outလုပျပေးကွပါဦး၊ sourceကတော့ ညီမပါ 100%၊ family ကိုတော့ ညီမ confirm မလုပျထားပါဘူး၊ ကွားတဲ့ သတငျးတှေ နဲ့ ညီမစုံစမျးရသလောကျ တငျပေးတာပါ speak outလေးလုပျပေးကွပါ please ” ။ ပရိတျသတျကွီးလညျး မတေိုးခိုငျလေး အန်တရယျကငျးရှငျးပွီး ဘေးကငျးလုံခွုံဖို့ အတှကျဆုတောငျးပေးကွပါ အုံးနျော။ဖတျရှု့ပေးကွသော ပရိတျသတျကွီး အားလုံးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။
Credit; Famoue Star